နားဦးတည့်ရာ နှစ်ဆယ့်သုံး – ABBA (Does Your Mother Know) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Music » နားဦးတည့်ရာ နှစ်ဆယ့်သုံး – ABBA (Does Your Mother Know)	15
နားဦးတည့်ရာ နှစ်ဆယ့်သုံး – ABBA (Does Your Mother Know)
Posted by မြစပဲရိုး on May 30, 2015 in Music | 15 comments
သူများ ကလေး ဆယ်ကျော်သက်တွေ အဆိုတော် တွေ၊ ရုပ်ရှင်မင်းသား တွေ ကို ခရေးဇီး ဖြစ်ကြချိန်မှာ
ကိုယ့် ကလေး အပါအဝင် သူတို့ ကျောင်းက မိန်းကလေးများ
“အင်္ဂလိပ် လူမျိုး ရူပဗေဒ သိပ္ပံပညာရှင် ပါမောက္ခ Brian Cox” ဆိုသူ ကို ကြွေကြပါတယ်။
အဲဒီလူ အသက် က သူတို့ အဖေ အရွယ် လို့ ခေါ်နိုင်မယ်။
ဒီမှာတော့ ဒီနေ့ခေတ်ထဲ မိန်းကလေး တွေ ယောကျာင်္းလေးများ နဲ့ ရင်ဘောင်တန်း နိုင်လာကြဖို့ကို ကျောင်းတွေ ကလဲ ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။
သူတို့ က မိန်းကလေးသီးသန့်ကျောင်းပါ။
. အဲဒီ မိန်းကလေး တော်တော်များများ က အရင် ယောကျာင်္းတွေ သာ ကြီးစိုးခွင့်ရခဲ့တဲ့ အာကာသ ဆိုင်ရာ ပညာရပ်တွေ၊ ကြယ်တာရာတွေ၊ သိပံ္ပပညာရပ် သုတေသနတွေ၊ ကား လေယာဉ် တည်ဆောက်မှု အကြောင်းတွေ ကို စိတ်ဝင်စားကြတယ်။
ဒီတော့ အဲဒီပညာရပ် ဆိုင်ရာ ထူးချွန်သူ တွေ က သူတို့ Role Model တွေ ဖြစ်လာတာ မဆန်းဘူးပေါ့။
မင်းသားလို ရုပ်ရည် ရှိတဲ့ ထို ပါမောက္ခ က ဘီဘီစီ Science Documentary တွေမှာလဲ Presenter လုပ်နေတော့ သူ့ Series တွေ လာတိုင်း ကလေး က စောင့်ကြည့်ပါလေရော။
သူကြည့်တော့ အဖေ နဲ့ အမေ ပါ ဝင်ရောကြည့်ပေါ့။
သူ့ ပါပါကြီး ခမျာကတော့ မိန်းမ နဲ့ သမီးက အားတက်သရော တောက်ပတဲ့ မျက်လုံး များ နဲ့ အားပေးနေတာ ကို အောက်သီးအောက်သက် နဲ့ သူလဲ ဝင်အားပေးရရှာပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ ခရစ်စမတ် အချိန်လိုမျိုးမှာ အထူး အစီအစဉ် အနေနဲ့ မိန်းမ သိပ္ပံပညာရှင် ချောချော တွေလဲ လာ တတ်ပါတယ်။
အဲဒီခါမတော့ ကိုယ်တော်ကြီး အလှည့်ပေါ့။
. ပြောလိုတာက အဲဒီ အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။
ဆယ်ကျော်သက်များ ရဲ့ စိတ်ကစားမှု ခေါ်မလား၊
နာမည်ကြီးလို့ ငွေကြေးချမ်းသာလို့ သူတို့ Crazy ဖြစ်သူ ဆို ကြီးလား ငယ်လား၊ ပျို လား အိုလား မစဉ်းစားဘဲ တွယ်တတ် ကြတာ သဘာဝ ဘဲခေါ်မလား။
ဒီလို ရင့်ကျက်မှု မရှိသေးတဲ့ စိတ်ကစားတတ် တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးများ ရဲ့ ဖျားယောင်းမှု နောက် ကို အဆင်အခြင်မဲ့ ယောင်ဝါးပြီး လိုက်ပါသွားတတ်ကြ တဲ့ စိတ်မခိုင်သူ အမျိုးကောင်းသား များကြောင့် ပျော်ရွှင်မှု ပျက်သုန်း ခဲ့ ရတဲ့ မိသားစုဘဝ ပုံပြင်တွေလဲ အများကြီးပေါ့။
မျိုးဗီဇ ရဲ့ လှုံ့ဆော်မှု ကြောင့်လား။
ပါတ်ဝန်းကျင် ရဲ့ တွန်းအားကြောင့်လား။
ဘာကို ဘယ်လို အပြစ်ပုံချသင့်လဲ မသိတော့။
ဒါပေမဲ့ သိတာ တစ်ခု ကတော့ ဘာကြောင်းကြောင့် ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ရွှေသမင် ဆိုတာ မင်းကြီးတာကဘဲ ထွက်တယ် ဆိုတဲ့ စကားရှိပါတယ်။
ကိုယ့်ဘက်က စည်းတားပြီး ကိုယ့်တာ ကိုယ်ကို လုံအောင်ထားနိုင်ရင် တစ်ဖက်မိန်းကလေးက ဘယ်လို မြူဆွယ် မြူဆွယ် ရှောင်ထွက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အတွေ့အထိ အာရုံ နဲ့ ဖျားယောင်း တာကို သာယာရတာ တစ်ခဏလေးပါဘဲ။
အဲဒီတခဏက ကိုယ့်ဘဝကြီး ကို တစ်သက်စာ အမှောင်ဖုံးသွားစေမှာ အသိရကြစေလိုပါတယ်။
ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတဲ့ တစ်ချက်က ကိုယ့်ရွှေပြည်ကြီးထဲ မှာ အလှအပ ကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး မိန်းမဂုဏ် ပြနေကြတာပါဘဲ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နစ်လိုဖွယ်ကောင်ပြီး တင့်တယ်အောင် အမြဲနေထိုင်သင့်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒါဟာ ကိုယ့်ဘဝ ကို မြှင့်တင်ဖို့ လက်နက် ကိရိယာလို သုံးဖို့ မဖြစ်သင့်ဘူး။
. အဲဒီ လက်နက်သုံးပြီး ယောကျာင်္းတွေ ကို အရူးအမူးဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်ဖို့ မဖြစ်သင့်ဘူး။
မျောက်ပြ ဆန်တောင်းသလို ရုပ်ပြပြီး ငွေခြူစား ဖို့ မဖြစ်သင့်ဘူး။
ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ရုပ်အလှ နဲ့ ခန္တာ အလှ ဆိုတာ က သက်တမ်း ရှိတယ်။
အဲဒီ သက်တမ်း ကတို ပါတယ်။
အဲဒီ သက်တမ်း တိုတို လေးထဲ မှာဘဲ ကိုယ့်လို ရုပ်ပြ၊ တင်ပြ၊ ရင်ပြ၊ ဗိုက်ပြ စားသူ တွေ တစ်ပုံတစ်ပင် ရှိနေတာ ပါ။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အလွယ်လမ်း မို့ပါဘဲ။
အရွယ်ငယ်ငယ် မှာ အကောင်းစား အဝတ်တွေ၊ အလှပစ္စည်း တွေ နဲ့ မွှန်းလိုက်ရင် တော်တော်များများ ကြည့်ကောင်း သွားတာပါဘဲ။
အဲဒါကို ကြော်ငြာ နိုင်ဖို့ အတွက် နေရာကောင်း ကလဲ အလွယ်ရနေတော့ မိန်းကလေး တွေ တော်တော်များများ လမ်းလွဲ လိုက်လာကြတာ နှမြောစရာ လို့ မြင်မိတာ။
အလှအတွက် တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ဟာတွေ သုံးဖို့ငွေ ကို ရအောင် ရှာရတော့တာမို့ အလွယ်မရတဲ့ ပိုက်ဆံကို အလွယ်ရအောင် အောက်လမ်းနည်းတွေ သုံးလာတော့တာ။
တစ်ဖက်ကလဲ ပိုက်ဆံကို အချောင်နည်းပါး ရပြီး ရေလိုသုံးနိုင်နေတဲ့ ပုရိသ လူတန်းစား များရှိနေပါတယ်။
ဒီမှာတင် ကြောင်ခံတွင်းပျက် နဲ့ ဇရက်တောင်ပံကျိုး တွေ့ ကြတာ မဆန်းပါဘူး။
မိန်းကလေး တွေ ကလဲ သူတို့ လှမှ နာမည်ကျော်မှ ထိုထိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ စပွန်ဆာ ရမှာမို့ ပိုလှအောင် ငွေလို တယ်။
ထိုထိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များကလဲ သူတို့ လက်ထဲ ငွေသီးနိုင်မှ ဤသို့သော မိန်းမလှလေးများ ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု ကို ရမယ်။
အဲဒီမှာတင် ကိုယ့် မြန်မာမိန်းကလေး အတော်များများ စပွန်ဆာ ရှာရလွယ်တဲ့ အလုပ်မျိုး တွေ ကို ရွေးပြီး ငွေရလွယ်ဖို့လမ်း ကို သာ ရွေးကြလေရော့ သလား။
အဲဒီမှာတင် အန်ကယ်ကြီး တို့ မှာလဲ ငွေတွင်းကြီး များ ကို တူးပြီးရင်းတူး နေရလေတော့သလား။
အလှကို ဦးစားပေး နေတဲ့ မိန်းကလေးများ မှာ သူများ နဲ့ ယှဉ်ရော ပညာ အရာ နဲ့ လူမှု ဗဟုသုတ အရာတွေ ဖက်မှာ နောက်ကောက်ကျနေတတ်တယ်လို့ ယူဆမိတယ်။
ဒီလို မိန်းကလေး တွေ အဲဒီလို အလွယ်မလိုက်အောင် ဘယ်က စပြီး ပြင်သင့်လဲ။
ဘယ်သူက စပြီး ရပ်သင့်လဲ။
အကယ်၍များ အမျိုးကောင်းသားကြီး များ က
## မိန်းကလေးများ ရဲ့ မြူဆွယ်မှု ကို ရှောင်ရှားကြမယ် ဆိုရင်
## အနှိပ်ခန်း တွေ ကရာအိုကေခန်း တွေ ကို မသွားကြဘူး ဆိုရင်
## ကိုယ့် မဟေသီ ကိုဘဲ မေတ္တာ ပုံပေးထားတတ်မယ် ဆိုရင်
## ကိုယ့် သားသမီးလေးများ ရဲ့ စံပြဖခင်အဖြစ် နေပေးမယ် ဆိုရင်
## ကိုယ့်ရဲ့ သမာအာဇီဝ မဟုတ်တဲ့ အချောင်ရဝင်ငွေများ နဲ့ အတိုင်းအဆမဲ့ သုံးနေတာကို ရှက်တတ်မယ် ဆိုရင်
## မိန်းကလေး တွေ ကောင်းရာလမ်းကို ရောက်ဖို့ တည့်ပေးနိုင်တဲ့ Role Model ယောကျာင်္းကောင်း ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင် …..
. ရွှေပြည်ကြီး ထဲ လူမှုရေး အရှုပ်အထွေး ပြသနာ တွေ၊ ပေါ့ပျတ်ပျက် မိန်းမငယ်လေးတွေ ၊ မိသားစု ပြိုကွဲမှုတွေ အတော်လျှော့သွား မလား မသိ။
နားထဲရောက်နေတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ကို ကြားရင်း ရေးချင်တာ ရေးလိုက်တာပါ။
မိန်းမငယ်လေး က လာ အီပြ လဲ ရှောင်ထွက်သွားတတ်တဲ့ သီချင်းထဲ က မဟာပုရိသကြီး ကိုတော့ ဦးညွှတ်လိုက်ပါရဲ့။
*** ကိုယ့်လူတွေ ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုနေမယ်မသိ။ *** lol:-)))
(သီချင်းကို မှီပြီး ရေးတာကြောင့် တစ်ဖက်သတ် ပြောသလို ဖြစ်နေပါက နောက်တစ်ပုဒ် မှာ ပြန်ပြီး Balance လုပ်ပေးဖို့ ကြိုးစားပါမည်။) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Brian Cox (Physicist, and professor of particle physics)
မြစပဲရိုး says: ABBA – “Does Your Mother Know”
Well … I can dance with you honey
အခုချိန်တော့ အတင်း ကိုမသိသိအောင် ကြိုးစားနေရတဲ့ မိခင်ဘဝ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: ပုရိသ ဟူသည်
အနည်းငယ်သော အလင်းရောင်ဆီ ရှာဖွေတိုးးးသကဲ့သို့ အမျိုးးသမီးးကို ရှာဖွေကြဧ။်
သူတို့ ရှေ့ တမင် လင်းးချင်းးတောက်ပ ပြသော် မစဉ်းးစားးမဆင်ခြင် တိုးးဝင်မှုပြုကြလေကုန်ဧ။်
ဟွာလေ စုန်းးဃိုင်းးဂျုပ် အရီးး နောက် လိုက်မိလို့ တဖွတ်သတ်ဖြစ်သွားးရင်
နောက် ပို့စ်မှ မျှအောင်ရေးးပေးးပါ့မယ် ညော်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အရင်က မိန်းကလေးတွေက အလှ အပ မက်လို့ စပွန်ဆာရှာရင်း ငွေနောက်လိုက်ပြီးအပျက်အစီးခံကြတယ်။
အခုခေတ်မှာတော့ယောက်ျားလေးတွေကလဲ စပွန်ဆာ ရှာတတ်နေပြီ။
အောင် မိုးသူ says: အတွေ့ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို သတိရမိတယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: အကယ်၍များ အမျိုးကောင်းသားကြီး များ က
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .တစ်လင်တစ်မယား စနစ်သာ ပြဌာန်းပေးလိုက်ပါလေ။ အားလုံး တန်ရာ တန်ရာပဲ ရမယ်။ တရားမျှတမှု ဆိုတာကို မိသားစု စနစ်အတွင်းမှာ သာ ထည့်ပေးလိုက်။ တစ်မိသားစုချင်းစီကနေ တစ်နိုင်ငံလုံးအထိဖြန့်ကျက်သွားလိမ့်မယ်။
မိဘ – သားသမီးကြားမှာလည်း တစ်ဖက်သတ်ဘုရားဟော တွေ ဖျက်ထုတ်ပြီး (ဥပမာ မိဘကို စိတ်နဲ့ပြစ်မှားမိရင်တောင် ငရဲတို့ ဘာတို့ပေါ့။ မိဘကျေးဇူး မြင့်မိုရ်တောင်ဦး တို့) အဲလိုမျိုး အလွန်အကျွံတွေ ဖဲ့ထုတ်ပြီး မိဘဟာ သားသမီးတွေ အပေါ်ကို တရားမျှတရမယ် လို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောကြစမ်းပါနော့။ တရားမျှတမှုကို မိသားစုထဲမှာ တည်ဆောက်ကြည့်စမ်းပါ (မိဘ-သားသမီး၊ လင်နဲ့ မယား )။ သတ်သေတဲ့ ဆရာဝန်မ ဆိုတာ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။
.ပြသနာတွေ အားလုံး ရဲ့ အစဟာ တရားမမျှတ တာကနေစတယ်ပဲ ထင်ပါတယ်။
Foreign Resident says: ” ဒီလို ရင့်ကျက်မှု မရှိသေးတဲ့ စိတ်ကစားတတ် တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးများ ရဲ့
ဖျားယောင်းမှု နောက် ကို အဆင်အခြင်မဲ့ ယောင်ဝါးပြီး လိုက်ပါသွားတတ်ကြ တဲ့
စိတ်မခိုင်သူ အမျိုးကောင်းသား များ ”
သူ ပြောမှဘဲ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ချာတိတ်မတွေ ရဲ့ ၊
ဖျားယောင်းခြင်း ခံနေရတဲ့ သားကောင် ဘဝမှန်း သိရတော့တယ် ။
ကိုယ့်ဖက်ကတော့ အဲဒီ ကိစ္စတွေကို ဆန်ပေး လို့ ဆေးရ တဲ့ ၊
အရောင်း အဝယ် ကိစ္စတွေ လို့ဘဲ မြင်မိပါတယ် ။
အဟိ ၊ ဒါပေမယ့် သတ်သေသွားတဲ့ မယားကြီး ဆရာဝန်မ ရဲ့ ယောက်ကျား ၊
သင်္ဘော ကပ္ပတိန် ဆိုတာ သားသား လုံးဝ မဟုတ်ဘူးနော် ၊ တိလား ။
Ma Ma says: အဘဖောက ဇွတ်အတင်းကို ၀န်ခံနေပါလား။ အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ သူ့မိဘများက စိတ်ကစားတတ်တဲ့အရွယ်မှာ ကိုယ့်အနီးနားကလူတွေနဲ့ဝေးအောင်
ကိုယ်ရဲ့လက်တွေ့ပတ်ဝန်းကျင်က မဟုတ်တဲ့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ မင်းသားကြီး ကျော်ဟိန်းကို စွဲလန်းခိုင်းပါတယ်။
သူ့ကားတွေ သူ့သီချင်းတွေကို အသည်းစွဲ၊ ထွက်သမျှ ၀ယ်ပေးတယ်၊ ပေးကြည့်တယ်။
သူလည်း ယနေ့ထိတိုင်အော်မေ့ဂိုဏ်းဝင်ဖြစ်နေတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
ဣတ္တိယ ဟူသည် ဆောင်းလေပမာညီ တို့
နွားနို့ကုလား နဲ့ ထန်းသမား ရေမရော တာ မိန်းမ တွေကြောင့် ရေရောရတာ တို့
အဲ့စကားတွေ ကို ညွန့်ဝင်း နဲ့ ချိုပြုံး ရဲ့ ဪ မိန်းမ မှာ ပြောကြတာပေါ့။
ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်ထောင်းကြရင်တော့ နဲနဲ သက်သာနိုင်ပါရဲ့။
အရီး စလိုက်ရင် နောက်က လိုက်မှာ သေချာတယ်နော် ကျုပ် တူမ ၁၃ ကြိုး။
၁၀၁ ကြိုး :-)))
ဒီရက်မှာပါဘဲ။ သတင်းတစ်ပုဒ် ထဲ ဒီနေ့ခေတ် အလုပ်များလွန်းတဲ့ မိန်းမ တွေ
အိမ်ထောင်ကို အတည်ဖို့ မပြောနဲ့ ပါတနာတောင် မထားနိုင်တော့ဘူးတဲ့။
အဲဒီ ကိစ္စအတွက် အချိန်မပေးနိုင် စိတ်မရှိကြတာများလို့ တဲ့။
ဒီတော့ ခရီး တွေ ဘာတွေ ထွက်ချိန် ကျား Escort ငှားပြီး သွားတာတွေ ခေတ်စားလာလို့ ဆိုလား။
. ကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားထဲ မှာ မင်းသမီး က အဲလို ငှားပြီးသွားတာ စည်းကမ်း နဲ့။
ရိုးရိုး အဖော်လုပ်လိုက်ဖို့ ဆိုဈေးတစ်မျိုး၊ ဟိုဟိုဒီဒီ ကိစ္စပါမယ် ဆိုဈေးတစ်မျိုးတဲ့။ lol:-))
အဲဒီ ရုပ်ရှင်ထက် အပြင်က အဖြစ်တွေက ပိုဆိုးနေပါပေါ့။
တစ်စုံတစ်ယောက် ကို အဲလို ပြောပြီး စမ်းကြည့်ကွာ။
တော်ကြာ ကြောင်နေလား ပြောခံနေရဦးမယ်။
အဲလို မျိုး တရားမျှမျှ Perfect ဖြစ်သွားတဲ့ လောကကြီး ကိုတော့ ရနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။
လူ တွေမှာက မသိစိတ် အတ္တတွေ Selfish Gene တွေ ဖွက်ပြီး ပါနေတတ်ကြတာကိုး။
လွန်လာရင်တော့ ဥပဒေ ကဘဲ ချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အနောက်တိုင်းတွေမှာ လိင်ကိစ္စဘယ်လောက် လွတ်လပ်တယ်ပြောပြော တစ်ဖက်မှာ အဲဒီလိုလွတ်ချင်တိုင်းလွတ်မရ အောင် ထိန်းထားတဲ့ ဥပဒေ တွေ အများကြီး။
ဥပမာ – ဆရာတိုင်း ကျောင်းက ကျောင်းသား/သူ နဲ့ လိင်ကိစ္စ ရှုပ်လို့မရ။ ထောင်ဒါဏ်ဘဲ။
“ဆန်ပေး လို့ ဆေးရ” တယ် ဆိုတာ လွတ်လပ်သောလူ ဆိုမပြောပါလေ။
အိမ်မှာ ရှိတဲ့ ဆေး ကို တော့ မသုံးဘဲ တစ်ခြားဆေး ကို ခိုးသုံး တာကတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။
တကယ်တမ်း လဲ ဒီခေတ်ကြီးထဲ မယားပြိုင် ထားရလဲ မထားရဲကြတာ များပါတယ်။
ဒါမျိုး လင်တော်ကြရမှာ ကြောက်လို့ ကျွန်မတို့မိန်းကလေး တွေ အပျိုကြီး ဖြစ်နေတာ။
ဟောဒီမှာ တရားခံ တွေ့ပြီ ဗျို့။
တရားခံစကားများ ကို အစိမ်းချယ် ထားလိုက်ပါကြောင်း။ lol:-))
သများ ကတော့ ဟို Princess and Photographer ထဲ က ဂျာပွန်ကြီး ကို ကြိုက်လိုက်ရတာ။
အဲလို ရုပ်မျိုး ကို မတွေ့တော့ ခက်ရော။
ဒါနဲ့ အော်မေ့ အဖွဲ့ထဲ သက်တမ်းကြာသွားတော့တာ။ :-)))
ခင်ဇော် says: Beaman, notamonster
ဦးကြောင်ကြီး says: အန်အယ်လ်ဒီလော်ဘီ အရီးလာဘ်မှာ သာမီးရှိဒရယ်ပေါ့စ်.. နိပ်ဟ
မြစပဲရိုး says: . ကျေးဇူးပါ ဇီ။ နောက် တစ်မျိုး အတွက် အချက်တွေ စုထားဟေ့။ lol:-)))
နယူးဗားရှင်း ကွန်မြူနစ်စ် ကြီး မဟာ ကြောင်ကြောင်
“နိပ်ဟ” ဆိုသည်မှာ ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်တုန်း ???? BTW
နီ နာ့ အကြောင်း သိတယ်နော်။ :-)))))))
Mike says: .အဲ့သီချင်း တော်တော်နားရည်ဝခဲ့သား
.ဘိုဘိုဟန်ကလည်း ပေါင်ချိန်စက် ဆိုတဲ့သီချင်းလေးဆိုထားတော့ပိုစွဲ( သံစဉ်ကိုပြောတာပါ)
.“” ဒီလို ရင့်ကျက်မှု မရှိသေးတဲ့ စိတ်ကစားတတ် တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးများ ရဲ့
.ဖျားယောင်းမှု နောက် ကို အဆင်အခြင်မဲ့ ယောင်ဝါးပြီး လိုက်ပါသွားတတ်ကြ တဲ့
.စိတ်မခိုင်သူ အမျိုးကောင်းသား များ ””…တဲ့လား .ခိခိခစ်ခစ်….သားတို့ကတော့ စိတ်ခိုင်မှခိုင်
.ကျု ပ်တို့လိုအဖိုးဂျီးကိုတော့ ဖျားယောင်းတဲ့သူမတွေ့သေးဘူး…တွေ့မှ ခိုင်မခိုင်သေချာပြန်ပြောမယ်..အဟွတ်
တောင်ပေါ်သား says: ငယ်ငယ်ကဘယ်သူ့ကြိုက်လည်းဆိုတော့ ခင်ယုမေ
ကျော်ဆွေကြီး ရှိနေလို့ စိတ်မကစားခဲ့ရပါဘူး အရီးရယ်
အဲ အဲ နောက်တော့ ခင်သီတာထွန်း
သူလည်း ပြုံးမောင်မောင်နောက် ပါသွားတာပါပဲ ၊
နောက်တော့ ကွကိုယ် အေးအေးနေရင်း မည်သို့ဖြစ်သွားသည် မသိ ဆိုသလို အိမ်ထောင်ကျတော့တာပါပဲ ၊
အခုတော့ သစ္စာရှိတဲ့ သက်မဲ့အရာလေးတွေနဲ့ပဲ အဖော်ပြုရင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2395
aye.kk says: အရီးရေ
သားက သွားခေါ်တာမျိုး မအေကြောင့်မလုပ်ရဲပေမယ့်၊သားထက်ငယ်တဲ့
မိန်းကလေးက ဆော့ဖို့ ပူဆာပြီး ခေါ်ဆော့တာ မြင်တွေ့ရပါတယ်။
အစ်မကစိတ်ပူတတ်သူဆိုတော့၊ သားထက်ငယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့ မဆော့စေအောင်
သား၂ယောက်က ကြင်ဖော်ရှာတွေ့ပြီ၊တစ်ယောက်ကတော့ ရည်ရွယ်သူရှိနေပေမယ်လို့
မယူသေးပါ။ ကျန်၂ယောက်က မိန်းကလေး စိတ်ဝင်စားမှု မရှိခဲ့ဘူး အခုထိပါ။
ဒါဟာ အစ်မကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတာ သုံးသပ်မိပါတယ် ။
အစ်မက သားတွေအားလုံးကို အနီးကပ်တင်းကြပ် ထိန်းချုပ်ခဲ့တာတွေလည်းပါနေပါတယ်။
တစ်ယောက်ကတော့ယူပြီးသွားပါပြီ၊ဒါဟာလည်း အစ်မဆီက ကြည်ဖြူစွာနဲ့ ခွင့်ပေးခဲ့လို့ယူတာမျိုးလည်း